Ingabe bewazi ukuthi indawo yokuvakasha yindawo ekhulisiwe yokuhlukumezeka kokukhathazeka. Futhi lapha akukhathaleki nhlobo ukuthi ulele esihlabathini eshisayo endaweni ethile eGibhithe noma uhlezi e-cafe eduze nolwandle e-Evpatoria. Futhi akusikho endaweni yezindawo zokungcebeleka, kodwa kungenxa yomzwelo owenza umzimba wethu ukhanyane futhi uphephile. Ukuthandana kwamaholidi, ukuthi kungani kwenzeka ekuphileni kwethu, uzofunda kusuka encwadini yethu.
Phela, lapho sihlala eholidini, sihlala nawo wonke amangqamuzana omzimba wethu futhi sikhohlwe ngokuphelele ngazo zonke izinkinga emsebenzini, mayelana nabangane abasondelene nabo, esiye saba nabo okuhle njalo, ukuphumula kubonakala sengathi kukhona okuhlukile. Kuphela eholidini singakwazi ukuphumula futhi sinikeze konke umphefumulo wethu okufunayo kuphela, futhi-ke, uthando lokwehla luyakwazi futhi aluhambisani nathi, kodwa ukuletha okuthile okusha nokukhanya empilweni yethu. Ngempela, i-holiday romance, kuyinto engafikelwe ukulibaleka engenakuqhathaniswa nanoma yini.
Ake ucabange ngelanga elishisayo, amagagasi alwa namadwala, alula, adlalwa umoya ophefumulayo futhi konke lokhu, kuveza imicabango emihle kakhulu eholela ebuhlotsheni obungahlanganisi. Phela, isimo esinjalo kuphela singavusa emicabangweni yethu ngisho nangokwenyama kancane.
Abantu abaningi, beye eholidini bodwa, bathi bazophumula futhi bangabi nobuhlobo ngaphandle kokuphumula abadingi. Kodwa kuyoba amanga, njengokumelana nesilingo, ngisho noma kungenakwenzeka ukuba nithandane nomunye. Phela, inkaba yendawo yokuvakasha iyimvelo futhi yemvelo. Abazali abaningi, ukuthumela indodakazi yabo eholidini, bamxwayise ngokumelene namaphutha futhi banikeze amazwi ahlukanisayo emgwaqweni ngakho akenzanga lutho oluyiphukuphuku. Futhi kaningi lokhu lokhu kungenxa yokuthi lapho omama ngokwabo bengena echibini benenhloko ekuthandweni kwezokuvakasha okungenani kanye ngesikhathi sokuphila. Masibe kanye, kepha bayakhumbula lokhu isikhathi eside.
Uthando lwezokuvakasha lungenzeka empilweni yethu ngenxa yokuthi ayibe yinto engokwemvelo, futhi ayinaso isikhathi sokuthuthukisa ukungqubuzana noma ukucasuka. Inkaba yeholide ilula nje futhi ayikho isikhathi eside. Futhi, ngenxa yalokho, zonke izinkumbulo zokuphumula ziba mnandi hhayi umthwalo.
Uma unothando lwezokuvakasha, into esemqoka akukona ukwenza iphutha elilodwa elikhulu abesifazane abathanda ukuzenza. Lephutha lapho owesifazane eqala ukucabanga ukuthi, kuthiwani uma ubuhlobo bakhe bungena engozini enkulu nakakhulu? Futhi kuthiwani uma lokhu kuyisikhathi sakhe futhi uzokwazi ukuhlala nalo muntu impilo yakhe yonke? Yiqiniso, konke kwenzeka empilweni, kodwa inqabile inkaba yendawo yokubhuka iphelile ngomshado futhi akumelwe sikhohlwe ngakho. Ngokuyinhloko, iningi labaholi bamaholide licabanga kuphela ngobuhlobo besikhathi esifushane, kuphela isikhathi sokuphumula.
Ukuthandana kwamaholidi kufana nesitshalo esithanda ukufudumala nakwezinye izimo zamadolobha amakhulu angeke sikhule. Amanoveli anjalo aphela ngeholide lakho bese ushiya izinkumbulo ezinhle kuphela kumhlanganyeli ngamunye futhi akukho lutho. Ucabanga ukuthi lokhu akwanele kuwe? Mhlawumbe. Kodwa futhi akufanele ukhohlwe ukuthi ukubuyisela leveli, uma ufika edolobheni lakho, uzothola ubudlelwane obusha bokuthandana, okuzoba yingozi nakakhulu.
Ekuphileni kwethu kungaba khona izinto eziningi ezimnandi, kepha ukuthanda iholide kuyinto engalindelekile. Ngakho-ke, uma uphumule, ungabuzi umthandi wakho wesikhashana ngalokho akwazi ukukwenza, yiziphi izimfanelo zakhe ezimbi, yini ayidla ngayo isidlo sakusihlwa? Phela, akudingeki ukwazi noma yini kulokhu kuphila kamuva.
Uma uthanda, ungatshela umngane wakho we-resort kuphela ukuthi ucabanga ukuthi kuyadingeka yini, futhi ngeke awazi okuningi kusuka kuwe, uzoqonda ukuthi umtshele ukuthi yini okucabangayo ukuthi kufanele.
Ungalokothi ube nesithakazelo kulokho okukwenzeka empilweni yakhe nokuthi kungani enquma ukuza wedwa, akekho ozokhuluma iqiniso. Ungaphazamisi inkululeko yakhe, makabe ephumula njengoba ebona kufanelekile. Emva kwakho konke, awusebenzisi yonke impilo yakho, ngakho masijabulele lezi zinsuku. Futhi ungikholelwe, umngane wakho wezokuvakasha uzokubonga ngenhliziyo yakhe yonke.
Futhi manje yonke imigomo emihle. Ukuphela kwakho kweholide kuphelile, futhi uthando lweholide luzophela. Hlala usuku ngaphambi kokuba uye ekhaya, ujabhe kakhulu futhi ucabanga ukuthi konke sekuphelile kakhulu empilweni yakho, kodwa kuhle ngempela! Ngakho-ke, iholidi lakho alilona ize. Ungakwazi, uma uthanda, qhubeka uxhumane naye, noma ungamane uhambe kahle futhi umbonge ngokuphumula okumangalisayo ayekusebenzise naye emasontweni adlule. Futhi ungikholelwe, uma ufika ekhaya lakho, uzoba nomuzwa ofudumele nje ngeholidi.
Futhi mhlawumbe, lapho usubuye futhi endaweni efanayo, uzophinde uhlangabezane naye futhi ngokumomotheka ebusweni bakho beza kuye, wazi ukuthi lapha uphinde futhi nawe. Kodwa khumbula into eyodwa, ukuthi imithandazo yeholide ayivamile ukuba yithando. Akusilo uthando, kodwa nje umxhwele nomqondo wenkululeko nokuthula.
Ukuthandana kwamaholide kwenzeka empilweni ngethuba elihle. Sicabanga kuphela olwandle, ilanga nolwandle, kodwa emva kwakho konke, sifuna kancane kancane nge-caress nokufudumala, futhi le mizwa emihle ingasinika nje uthando lokuvakasha. Futhi ungesabi lokhu, ngoba siphila ekuphileni kanye kuphela! Ngakho-ke kungani singenzili injabulo encane kangaka ezohlala emiphilweni yethu ngenkumbulo ende.
Sithemba ukuthi incwadi yethu ikusizile ukuthi uthole ukuthi kungani lezi zothando zomshado zenzeka empilweni yakho. Futhi ake u-romance lwe-holiday luhlale lukhunjulwa empilweni yakho.
Indlela yokuthethelela ukukhashelwa komfana?
Ukumiswa kwengane: ukuvivinya umzimba
Umkami kaGregory Leps - "Kumele ube idiot ukuba ubaleke kumfazi onjalo!"
I-Biscotti ene-almonds ne-orange peel
Imithetho ejwayelekile yokubala izinwele
Ungaba kanjani umsebenzi obalulekile?
Inkukhu inamathele ku-cops chips
Amaphikishi wokubheka ubuso obuqabulayo